Izay afaka hihaona tsara ny ankizivavy: ny toerana tsara indrindra
Mahazo ny ankizivavy atao amin’ny toe-javatra rehetra, fa any amin’ny toerana sasany mba ho mora kokoa. Indrindra dia nahalala tao amin’ny tambajotra sosialy. Mahafinaritra eny amin’ny toeram-bahoaka manana tombony kokoa, tsy mitaky manokana ara-bola ny fandaniana sy hamela anao mba hihaona ny ankizivavy iray mifototra amin’ny tombontsoa iombonana. Aza adino ny momba ny toerana izay tsy mety. Matetika hihaona amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy, satria izy ireo dia iray amin’ireo tena fahita fantsona ho an’ny fifandraisana. Eto dia afaka mahazo mahalala ny tena olona, ary mahafantatra avy hatrany ny vaovao rehetra. Manoratra fotsiny voalohany indrindra ny tovovavy dia tsy: mandray ny hafatra avy amin’ny olon-tsy fantatra: «Miarahaba. «, ho fotsiny tsy miraharaha. Voalohany, ilaina ny mandinika ny pejy, ary mahita ny zavatra tena mpijery (afa-tsy sary ny tenanao, lubimoye afaka ho mozika, ny sarimihetsika, mahaliana teny amin’ny rindrina na fiaraha-mientana ifampizarana namana. Manomboka ny resaka tokony mifototra eo amin’ny filazana ny zava-misy izany. Ohatra, raha nahatsikaritra amin’ny Instagram boky sary fa Ianao vao mamaky na te-hanao izany amin’ny hoavy, dia afaka manontany hoe inona ny tovovavy mihevitra ny momba azy, raha toa izy ka namaky ny boky hafa noho izany ny mpanoratra na ny tao amin’ny andian-dahatsoratra ity. Toy izany taratasy, raha ny ankizivavy mandeha an-tsitrapo eo amin’ny fifandraisana, dia azo atao ny mandika ny hafatra manokana momba ny hafa tambajotra sosialy, izay afaka ampidirina rehetra ny charisma, ary mitady manokana ny fivoriana. Ny pejy manokana dia tokony ho feno, no tena sary sy ny fara fahakeliny, roa rakitsoratra teo amin’ny rindrina. «Sandoka» pejy hanaitaitra anao eny, ary raha ny ankizivavy no tena mahaliana anao, dia hahaliana tokoa ny hahita ny tombontsoa sy ho antoka fa olona tena. Dingana-by-dingana torolalana momba ny fomba hitsena ny ankizivavy «Mampiaraka ny fanambadiana». Ao amin’ity lahatsoratra ity, Ianao dia hianatra ny fomba hiomanana ny mombamomba azy, ahoana no mifidy ny tovovavy izay mba hanoratra raha ny fivoriana. Taorian’ny fivoriana, tokony mba hitandrina azy liana amin’ny fifandraisana. Noho izany dia mila manaraka fitsipika tsotra vitsivitsy.
Ao amin’ny dihy an-tsekoly ny zatovovavy mpanjifa kokoa noho ny olona, noho izany dia azo antoka ny sonia ho an’ny antokony. Mba hisorohana ny fandaniam-bola, afaka mandeha any misokatra maimaim-poana ny fampianarana sy hiezaka ny hihaona aminao any. Vehivavy mihoatra ny taona fitiavana mpivady kilasika dihy, ka raha tsy misy ny mpiara-miasa izy ireo, dia matetika no mitady vady ao amin’ny vondrona, dihy ny sekoly na ny sehatra fiadian-kevitra. Dia afaka miezaka ny vintana misy sy ny sonia miaraka amin’ny tsara mpiara-miasa, ohatra, mazava ho azy fa tango.
Ny fitness fikambanana
Ao ny fanatanjahan-tena maro andrim-panjakana na efa mendrika ny slim ankizivavy na ireo izay eo amin’ny lalana marina izany. Mba hahafantatra ampy mba handeha sy manolotra fanampiana amin’ny simulator na manomboka amin’ny fiderana ny fomba be dia be ny ankizivavy dia «mafy loatra». Ny tena zava-miafina — Amin’ny saina tsy tokony ho Intrusive. Eto dia ny tsipiriany torolalana ho an’ny mpandeha any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena. Tokony ho tonga mialoha sy hiakatra ho any amin’ny vending vehivavy na ny namany roa. Afaka miresaka momba ny lohahevitra momba ny fanofanana, dia anontanio ny fomba manakatona ity lohahevitra ity dia izy fa afaka milaza aminareo ny momba ny mpandaha-teny. Raha ny lesona lava, ao amin’ny faritra afovoany matetika aina, nandritra izay azonao atao ihany koa ny hahafantatra. Fa tany am-piandohana mba manao izany tsara kokoa: matetika ara-tsaina fiofanana manome ny mpivady ny asa, ka raha mamely ny olom-pantatra ao am-boalohany, avy eo dia mety ho mahasoa.
Taranja ny fiteny vahiny
Eto dia toerana ho an’ny famoronana: tsidiho ny fianarana ny teny manambara ny lehilahy toy ny lehilahy iray izay nanokatra izao tontolo izao sy ny fahalalana vaovao, raha ny vehivavy toy izany. Ny fianarana ny teny dia mamela anao mba ho namana vaovao, mianatra be dia be momba ny firenena samy hafa sy ny isan-karazany ny resume. Ny olona miseho matetika ao amin’ny teny mazava ho azy fa ny hianatra ilay fiteny noho ny antony manokana, sy ireo vehivavy toy ny fialam-boly. Amin’ny toe-javatra toy izany, ny ankizivavy dia misokatra ho vaovao ny olom-pantatra sy ho faly amin’ny saina avy amin’ny ankizilahy na ankizivavy. Ankoatra izany rehefa ny fianarana ny teny ao amin’ny kilasy hanangana ny lohahevitra iray, noho izany, alohan’ny Mampiaraka, dia afaka hianatra ny sasany amin’ireo vaovao momba ny tovovavy. Raha te-hianatra ny fomba mihaona sy mifandray amin’ny zazavavy, ho azo antoka ny hamaky: lesona ny fiara tsy mataho-dalana ho an’ny mpanao voalohany. Ao amin’ity lahatsoratra ity, iray amin’ireo mpandray anjara tsy tapaka nizara ny traikefa mamitaka ny vehivavy. Isan-karazany ny vondrona ny kilasy no fanampiana lehibe saro-kenatra, rehefa mifandray amin’ny vehivavy. Raha izany dia Ny olana, dia be dia be ny fanazavana ilaina ho hitanao ato amin’ity lahatsoratra ity. Raha vao mahita ny marina ny ankizivavy mba hanasa azy amin’ny daty voalohany. Izany no tena zava-dehibe ny mifidy ny toerana tsara. Ny tena tany am-boalohany toerana ho daty voalohany eto. Ny zazavavy ho azy ny faniriany hanampy ny hafa, ka amin’ny fivarotana dia azo ampiasaina soa aman-tsara. Raha toa isika dia miresaka momba ny fivarotana akanjo, dia afaka mahita ny toro-hevitra momba ny na ny manokana ny zavatra, na tsy. Ao amin’ny toeram-pivarotana lehibe mba hanatsarana ny kalitaon’ny vokatra, mba manontany dia sarotra ny mahandro sakafo izay te-hividy. Ankizivavy zara raha mandà ny hanampy. Tsy vaovao any amin’ireny faritra ireny dia tsy mitaky fampiasam-bola ara-bola fanampiny, fa mety hitera-doza, tsy mba hanohy ny fifandraisana any ivelany sy ny fivarotana. Toy ny saika na aiza na aiza misy mpanolo-tsaina, dia tokony avy hatrany intsony ny olana amin’ny resaka aiza no hahitana ny boky manokana. Raha ny fitoeran’entana dia tovovavy amin’ny boky izay efa namaky, ianao afaka ny ho tonga sy manome toro-hevitra na hividy ity boky ity na tsia. Tsara nahalala lohahevitra sampan-draharaha, ny fisafidianana ny ankizivavy mitovy tsiro ny literatiora. Ny tena manararaotra izany Mampiaraka ianao dia afaka mahita ny vehivavy amin’ny toy izany mahaliana. Ao ny zava-nitranga bahoaka ny olona rehetra amin’ny toe-po tsara, ny olona tonga mba haka aina sy socialise amin’ny sendra olon-tsy fantatra. Amin’ny toe-javatra toy izany dia mety tsy misy olana manaitra ny resaka miaraka amin’ny mpiara-monina eo amin’ny seza, ho avy ny miresaka amin’ny Ankapobeny latabatra ary asao ny tovovavy tsara tarehy mba handray anjara miaraka Aminareo ny fifaninanana. Olona an-tsitrapo mifandray sy mahazatra taorian’ny hetsika afaka mifindra any amin’ny toerana mangina. Ny tora-pasika no toerana lehibe iray hafa izay olona tonga mba haka aina. Ny Spa tontolo no mitondra ho mora sy tsy ara-potoana ny fifandraisana. Isika efa iray hafa lahatsoratra feno fanoloran-tena ny tora-pasika Mampiaraka. Ianao dia hianatra ny fomba hanatonana azy, dia inona ny hoe, ny fomba fitondran-tenany. Raha tianao ny tantara na ny zava-kanto, ny tranom-bakoka sy ny fampirantiana dia ihany koa ny sehatra iray tsara ho an’ny Fiarahana. Ny fitsipika eto dia mitovy amin’ny rindran-kira na ao amin’ny fivarotam-boky. Iray amin’ireo ny lafy mahatsara ‘ ity toerana ity — tonga eto, matetika antitra, ny vehivavy mpanankarena noho ny telo-polo taona. Noho izany, raha te-marin-toerana, Matotra, ary lehibe fifandraisana — toerana izany dia mety tsara mba hamely ny olom-pantatra. Raha toa Ianao ka mahay sary hoso-doko na ny zava-kanto, ianao dia afaka manolotra ny vehivavy tantara mikasika manokana ny fampirantiana. Amin’ny tanàna lehibe misy tsy mahazatra ny tranom-bakoka: ohatra, ny antitra slot milina izay afaka milalao ny Sovietika lalao. Fampidirana tao amin’ny fampirantiana, na amin’ny ny teatra azo avy hatrany ny hampitombo ho daty voalohany. Hihaona aminareo na amin’ny amin’ny bar, fotsiny ny hoe: Miarahaba. Azonao atao ihany koa hanatevin-daharana ny tovovavy mandritra ny fandihizana. Toy ny olom-pantatra, dia saika tsy hiverina ho fifandraisana maharitra, sy mbola mandany vola amin’ny molotov ho an’ny tovovavy tsirairay. Ny tsipiriany rehetra eto: ny Fomba hitsena ny tovovavy tsara tarehy tao amin’ny alina club: tsikelikely toromarika. Mba hahazoana mahafantatra tsara ny tovovavy tsara tarehy no tsy maintsy misafidy ny sasany toerana manokana. Indraindray dia ampy fotsiny ny mandeha mivoaka sy mijery. Izany no tsara indrindra mba hihaona amin’ny tanàna Afovoany làlana, kianja, ao amin’ny valan-javaboary sy ny efamira, izany hoe tsy misy, ny olona izay tonga fotsiny mba handeha sy haka rivotra madio. Misy ny fomba fijery fa ny tovovavy efa ratsy ny toe-tsaina manoloana ny Mampiaraka eny an-dalambe. Raha ny marina izany dia tsy. Ny ankamaroan’ny ankizivavy tanteraka araka ny tokony ho izy mifanaraka tsara amin ‘ ry zalahy izay manatona azy eny amin’ny toeram-bahoaka. Raha toa Ianao ka tsara ary matoky izy fa angamba manana ny karajia ianao minitra vitsivitsy mba miombon-kevitra amin’ny daty sy ny manome ny finday maro. Lahatsoratra lohahevitra: ny Fomba hahazoana nahalala vehivavy tsara tarehy eny an-dalana: ny fomba tsara indrindra ary ohatra tsara ny andian-teny. Azonao atao ihany koa ny manao ny fifandraisana vaovao eo amin’ny fitateram-bahoaka. Rehetra izany no ilainao dia kely fahatokian-tena, sy fikirizana, ary ny roa ny mitovy andian-teny voalohany. Ny fitaka rehetra izahay, dia nambaranay tamin’ny lahatsoratra: ny fomba hitsena ny tovovavy eo amin’ny fiara fitateram-bahoaka, ny bus, ny metro na ny fiara fitateram-bahoaka intsony. Ny tsotra indrindra safidy izay mitaky tsy misy fanampiny hetsika. Ampy mba hameno ny endrika sy ny mampakatra ny sasany sary tsara tarehy. Na izany aza, misy zavatra sasantsasany amin’ny antsipiriany. Matetika misy nipetraka ny zazavavy, izay tsy afaka hihaona amin’ny olon-tsotra amin’ny fiainana. Izany dia matetika mifandray amin’ny ny tena ratsy tarehy tarehy, na ny hafahafa toetra sy ny fitondran-tena. Io fomba Fiarahana mitaky be dia be ny fotoana sy faharetana: dia tsy maintsy mijery lavitra. Lehibe drawback dia ny hoe maro ny toerana dia mitaky ny ara-bola ny fampiasam-bola: mba hahazoana ny vaovao feno ao amin’ny endriky ny ankizivavy sy manana ny fetrany mametra ny hafatra, tsy maintsy mandoa vola. Ny ankizivavy izay miasa ao amin’ny asa, lalandava hisarihana ny lehilahy ny saina. Dia mamorona karazana «tsimatimanota» ny mpanjifa. Raha te-hitsena ny tovovavy tahaka izany, dia tsara indrindra ny «watch» izany marina rehefa tapitra ny fiovana eo ny lalana an-trano. Tsy misy ara-dalàna ny vehivavy dia tsy ho tsara ny tipsy tovolahy. Manatona ny zazavavy dia tsara kokoa mahonon-tena sy ny toe-po tsara, ary tsy mampiraikiraiky ny setroka. Noho izany, mba hihaona ny ankizivavy iray, mandehana any amin’ny tambajotra sosialy na mandehana any amin’ny toerana izay ahafahanao mahita vady ny tombontsoa mitovy. Ara-bola ny vola lany dia matetika no tsy maintsy, raha Tsy mandeha ny club alina. Ary manodidina ny lafiny tokony ho mpivarotra ireny any amin’ny toeram-pivarotana, tsy mba menatra ny ankizivavy miezaka hahafantatra amin’ny fitateram-bahoaka ary tsy ho very fotoana amin’ny Mampiaraka toerana. Raha ny hevitro, mora kokoa fotsiny mba hahafantatra ao amin’ny tambajotra sosialy, fantatro fa vitsy ny mpivady izay nanomboka ny fifandraisana. Nanoratra ny zazavavy nahita tany amin’ny Oniversite, fa tsy sahy ny ho tonga sy ny hihaona aminao. Amin’ny Mampiaraka toerana. Aho niaraka tamin’ny vadiny teo amin’ny toerana Mampiaraka nihaona. Fito taona ihany velona sy ny ankizy roa =) Tsy miombon-kevitra momba ny fitateram-bahoaka. Tsy foana tao amin’ny fitateram-bahoaka mivarotra-nivoaka, noho izany dia afaka «ny horonam-boky» tsy misy ilaina ny vavolombelona. I-introvert, tsy fantatro izay hataoko tsy misy ny tambajotra sosialy, satria ny hany fomba mba hianatra. Raha tsy, dia ho ho extrovert na loner: Raha fitondran-tena ny fitsapan-kevitra ny namanao mpivady, ho azo antoka: mba hihaona mety ho na aiza na aiza. Ny zava-dehibe, saro-kenatra sy manadino ny hevitra raiki-tampisaka momba ireo faritra. Ny safidy avy amin’ny lahatsoratra tsara, vao zara raha mila mitoetra eo aminy. Na izany aza, miezaka avy ny tolo-kevitra safidy, ianao dia ho mora foana ny hahitana namana vaovao, ary raha antokony handeha bebe kokoa sy ny fivelarana dia hanitatra. Ankehitriny ny lamaody amin’ny Aterineto mba hihaona sy ny tsy mandeha na aiza na aiza, ary ny ankizivavy dia afaka miaina mba jereo, ohatra, dia «Mampiaraka amin’ny fanambadiana» ny Iray amin’ireo fomba mahomby indrindra amin’ny Fiarahana dia Mampiaraka taorian’ny fiofanana ambony tao amin’ny sekoly ny Fiarahana Kazachinsko. Ny ry zalahy izay nandeha Niaraka mavitrika manolotra izany ho an’ny hafa, ary misy dia tsy mitsahatra mikoriana ny lahatsoratra Tsara, be dia be ny zavatra mahaliana, mazava ho azy fa tsy miombon-kevitra Mampiaraka toerana, tsy ny toerana rehetra ny karama sy tsy toerana rehetra tovovavy no tena mampalahelo, dia mihaona eo amin’ny toerana ny fifandraisana, tsara ny fifandraisana, ny teny dia maro, ny tena noho ny mombamomba tsara mameno ny sary ny ara-dalàna, ary ho an ‘ ny tenany. Ary aho araka ny fisaraham-panambadiana, afa-tsy amin’ny toerana Fiarahana sy mipetraka, amin’ny fotoana ao amin’ny tontolo tena izy dia lasa tanteraka, ary avy eo dia nandeha nifidy niresaka firesahana amin’ny sy ny daty. Haingana sy mora izany, indrindra fa amin’izao fotoana izao, ny ankizivavy dia ho tonga bebe kokoa misokatra. Mipetraka, na «Fiarahana» na «Fiarahana ho an’ny Mpivady» misy be dia be ny ara-dalàna ny vehivavy any Tehran. Amin’ny fipihana «Misoratra anarana», ianao miaiky fa efa namaky ny Teny ny fanodinana ny angon-drakitra manokana sy hanaiky azy ireo
← Dia mampiaraka ny firaisana ara-nofo Sary (firaisana ara-nofo fihaonana)
No iray Italiana - mampiaraka toerana →